अधिनायकवादको ‘प्रोपोगाण्डा’ मार्फत खोजिएको वाह्य हस्तक्षेप | Mechikali Daily
अधिनायकवादको ‘प्रोपोगाण्डा’ मार्फत खोजिएको वाह्य हस्तक्षेप
Posted By: adminon: October 25, 2017 In: बिचार
असोज १७ को वाम तालमेल र एकता घोषणाको पहिलो कार्यान्वयन कात्तिक ५ मा सुरु भयो । ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सदस्यमा एमाले र माओवादीले तालमेल गरे, त्यही अनुसार उम्मेदवारी दिए । दशैंमा राष्ट्रले पाएको यो आश्चर्यजनक उपहारको सुखद आरम्भ भाइटीकाको भोलिपल्टबाट भयो । एमाले र माओवादीले ६०–४० को अनुपातलाई ध्यानमा राखी संयुक्त ¥यालीसहित मनोनयन दर्ता गराए । संयुक्त उम्मेदवारी दर्ताले पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढेको छनक दियो ।
घोषणादेखि सुरुभएको वाम तालमेलमाथिको वहस पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवाारी दर्ता हुँदासम्म जारी छ । यो वहस नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण नहुँदासम्म वा यो प्रयास असफल नभएसम्म जारी रहनेछ । विषयगत डिस्कोर्स त नियमित प्रक्रिया नै हो ।
वाम तालमेलमाथिको वहसमाथि अनेक कोणका तर्क÷वितर्कलाई पृष्ठभूमिमा राखेर मुल प्रवृत्तिलाई हेर्दा एउटा निश्कर्ष खिच्न सकिन्छ । मुलुकको बहुमत हिस्साले वाम तालमेलको खुला समर्थन गरेको छ । तालमेल र एकताको पक्षमा आएका बलिया तर्कले भन्छन्–पार्टीहरुमा तालमेल–एकता सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ, किनकि एकताले शक्ति प्राप्त गर्छ । अर्को बलियो तर्कले भन्छ –कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको खोटपूर्ण निर्वाचन प्रणाली र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रका बीचमा यो गठबन्धनले स्थायी सरकारतर्फ डोहो¥याउँछ । सम्भवत वाम कार्यकर्ता र समर्थकमात्र नभएर राजनीतिशास्त्री र आम नागरिकले समेत यो गठबन्धनप्रति आशा राख्नुको पहिलो कारण त्यही हो ।
गठबन्धनका विपक्षमा आएका तर्क फितला छन् । ती तर्कमा राजनीतिक नैतिकतालाई आधार बनाएर माओवादी केन्द्रमाथि आक्रमण गरिएका छन् । कांग्रेस र भारतलाई एकैसाथ उच्च भोल्टको विद्युतीय झड्का दिई माओवादी एमाले नजिक पुग्दा पूर्व सहयोद्धाको आक्रोश अनुमान गर्न सकिन्छ । वालुवाटार र ७ रेसकोर्स रोडलाई आकस्मिक आश्चर्यमा पार्दै प्रचण्डले लिएको ‘यु– टर्न’ बाट मर्माहत कोही छ भने देउवा र मोदी नै हुन्न्,पराकम्पन अन्य शक्ति केन्द्रले महसुस गरेको उनीहरुका राजनीतिक परामर्शबाट थाहा हुन्छ ।
आफू अनुकूल गठबन्धन हुँदा मैत्री र स्वाभाविक गठबन्धन हुने र अर्कासँग गर्दा अमैत्री र अस्वाभाविक भन्ने राजनीतिक परम्परालाई महत्व नदिने हो भने अहिले कांग्रेस र भारत प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि यो गठबन्धनको उद्धेश्य भने कसैलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥याउनु होइन, कसैसँग प्रतिशोध लिनु पनि होइन । किनकि प्रतिशोधको राजनीति देशवासीलाई साक्षी राखेर गरिँदैन, यो त रणनीतिक हुन्छ ।
यतिबेला गठबन्धनमाथि प्रहार भएको एउटा तर्क छ–यो गठबन्धन नेपालमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उदेश्यबाट भएको हो । अर्थात् कम्युनिष्ट अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो । एक दिन अघिसम्म शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका एमाले र माओवादी केन्द्र एक दिनपछि एउटै मञ्चमा देखिँदा कम्युनिष्ट तानाशाही स्थापनाका लागि हुन् भन्ने प्रचार धोका पाएपछि देखाइएको खोटमात्र हो ।
त्यसो भए किन कम्युनिष्ट अधिनायकवाद उचालिँदैछ ? यसमा मुल दुई कारण छन् । पहिलो, कम्युनिष्ट अधिनायकवादको एकोहोरो भ्रामक प्रचार गरी वाह्य हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्नु । दोस्रो, नेपाललाई चिनियाँ मोडलतर्फ लैजाने रणनीतिक प्रयास भन्दै वाह््य शक्ति केन्द्रलाई चीनविरोधी गतिविधिको प्रोक्सी युद्ध सञ्चालन गर्न ‘स्पेस’ प्रदान गर्नु ।
वाह्य हस्तक्षेपको उद्धेश्यसहितको अधिनायकवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण
कम्युनिष्ट गठबन्धन भनौँ वा वाम, यसले न शक्तिलाई व्यक्ति केन्द्रित गर्छ न व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्छ । किनकि संविधानसभाद्वारा प्राप्त वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाभित्र प्रचार गरिएजस्तो अधिनायकवाद स्थापनाको बाटो नै छैन । न यो गठबन्धनले राजनीतिक वहुलवादलाई नै सीमित वा निषेध गर्छ ।
कार्यकारीद्वारा राज्यका निकायलाई कमजोर बनाउँदै नियन्त्रण गरी अधिनायकवादी सत्ता स्थापना गर्छ भन्ने हो भने त्यो पनि सम्भव छैन । अधिकारको दुरुप्रयोग गर्ने लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने एमाले हो भने न्यायमूर्ति सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने कांग्रेस हो । अहिले ११ जना न्यायाधीशलाई हटाउने षड्यन्त्रमा पनि कांग्रेस संलग्न देखिन्छ ।
संविधानवाद, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायलयमाथि आक्रमण गर्ने कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्याय हुने र स्वतन्त्र न्यायलयका पक्षमा उभिने एमाले अधिनायकवादी हुने ? यो आरोपको अन्तर्य यसो होइन भन्ने कांग्रेसका नेतालाई थाहा छ । एमाले र माओवादीका नेता महत्वकांक्षी सैन्य अधिकारी होइनन्, न कट्टर धार्मिक गुरु हुन्, जसका अनुयायी सत्ताका लागि रक्तपातमा उत्रिऊन् । सशस्त्र जनयुद्धको माओवादीलाई हेरेर सहकार्य गरेको माओवादी कांग्रेसले कसरी बिर्सन सक्छ ?
त्यसैले कहीँ कतै पनि अधिनायकवादको सम्भावना छैन । फेरि कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा प्रचण्डको लोकतान्त्रिकरण हुने र एमालेसँग तालमेल गर्दा तानाशाहीकरण हुने अनौठो तर्कलाई समाजले कसरी पत्याउँछ ? त्यसैले ध्वंशात्मक आलोचकहरुको अधिनायकवादको यो हतियारले काम गर्दैन ।
२०७० सालको संविधान सभा निर्वाचन परिणाम र २०७४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणाम हेर्दा नेपालमा बामपन्थीसँग पूर्ण बहुमत छ । ती दुई निर्वाचन भन्दा अहिले अवस्था थप सकारात्मक भएकोले त्यो प्रतिशत बढ्छ । अझ वाम गठबन्धनले केही तटस्थ मतलाई समेत आफूतर्फ आकर्षित गरेको छ । यो सबै कांग्रेसले नबुझ्ने कुरा भएन । निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले दुई तिहाई मत ल्याउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि मुलुकले स्थायी सरकार पाउँछ । अर्थात् नेपालका वामपन्थीले कम्तिमा पनि पाँच वर्ष स्थायी सरकार चलाउँछन् ।
पाँच वर्षमा राम्रो गरेमा त्यसले वाम राजनीतिलाई थप स्थायी सत्तारुढ बनाउँछ । वाम गठबन्धनले राम्रो गर्ने संकेत पछिल्ला सरकारलाई हेर्दा केपी ओली सरकार र पहिलाको सरकार हेर्दा मनमोहन अधिकारीको सरकारबाट प्रमाणित नै छ । ओलीले देशको विकास र समृद्धिको सिद्धान्त÷नीतिको मार्गचित्र त कोरे नै, व्यवहारिक रुपमा तिनको कार्यान्वयन पनि सुरु गरे । ओलीले इतिहासमा आफ्नो अलग पहिचान बनाए । चीनसँगको ऐतिहासिक सम्झौता ओलीले गरे, जो २०४६ पछिका कुनै प्रधानमन्त्रीले साहस गर्न सकेका थिएनन् ।
अर्थात् कांग्रेस र तिनका नेतामा बेचैनी र त्रास छायो । कुनै पनि हालतमा वाम गठबन्धनसँग लड्ने सामथ्र्य देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग छैन । रामचन्द्र, शशांक आफै असुरक्षित छन् । त्यसो भए अब के गर्ने ? वाह्य शक्ति गुहार्ने ? कसरी गुहार्ने ? हो, यसरी यो अधिनायकवादको जन्म गराइयो । विश्वमा कम्युनिष्टहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालमा कम्युनिष्टहरु मिलेर अधिनायकवाद स्थापना गर्न लागेका छन् भन्ने प्रचार गरेमा भारतलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यले यो गरिएको हो ।
महाशक्ति अमेरिका र युरोपेली संघले वैचारिक दृष्टिकोणले कम्युनिष्ट र धार्मिक दृष्टिकोणले मुस्लिमलाई निशाना बनाएको देखिन्छ । अहिले कांग्रेस सभापति देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि त्यहाँका युवा नेतामा समेत भारत, अमेरिका र युरोपेलीहरुलाई अधिनायकवाद स्थापना हुँदैछ, त्यसो भएमा पश्चिमाले अभ्यास गर्दै आएको प्रजातन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने त्रास देखाइएको छ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दोस्रोःवाम गठबन्धनमा चीनलाई मिसाउँदै बेइजिङबिरोधी राजनीति ।
यतिबेला चीन आफैं सन् २०५० सम्ममा विश्वको महान आधुनिक समाजवादी राष्ट्र हुने कार्यक्रम तय गर्न व्यस्त छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले सीपीसीको जारी १९ औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा दिएको संवोधनमा चीनले विश्वको नेतृत्व गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
विश्वको नेता बन्ने चीनको घोषणाले अहिले गति पाएको हो । सी जिनपिङले सन् २०१३ मा राष्ट्रपति बन्दा नै महाशक्ति हुने संकेत गरेका हुन् । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भारत र चीनको चासो हुने नै भयो । अमेरिका र युरोपेली संघलगायतका शक्तिसमेत नेपालको घरेलु राजनीतिमा नजिकबाट चासो राख्छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर देउवा गठबन्धनको सरकार निर्माणमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको सार्वजनिक छ । भारतीय संचारमाध्यमले देउवालाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको हुनाले उनले भारतीय स्वार्थ प्रतिकूल काम गर्न सक्दैनन् भन्ने समाचार प्रवाह गरेकै हुन् । त्यसबेला चीन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको भन्ने खालका रिर्पोट पनि नयाँदिल्लीबाट प्रेषित भएका हुन् ।
अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको तालमेल र एकताको निर्णयलाई कांग्रेस, भारतीय मिडिया र कुटनीतिक विश्लेषकले यो निर्णय चीनको सहयोगमा भएको प्रोपोगाण्डा गरिरहेका छन् । बाम एकतामा चीनको समर्थन÷सद्भाव छ÷छैन त्यसतर्फ बेग्लै बहस गर्न सकिन्छ । तर चीनको पहलमा नेपालमा वाम गठबन्धन÷एकता बनेको भन्ने प्रचार गर्दा भारतको मात्र होइन अमेरिका र युरोपेली संघलगायतका शक्तिको पनि समर्थन पाइन्छ भन्ने बाहेक यसमा अर्को कुनै सत्यता छैन । नेपालमा चीनको भूमिका बढेको र त्यसले पश्चिमा स्वार्थलाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने उदेश्य राखी चीनविरोधी राजनीतिमा काठमाडौँलाई प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर जे उद्धेश्यका लागि अधिनायकवादको यो कार्ड फालिएको छ, त्यो असफल भइसकेको छ । प्रयास भने जारी छ । घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न वाह्य शक्तिलाई आव्हान गर्ने राजनीतिक दल÷नेतृत्व नेपाली जनतामा मत माग्न जाने नैतिक बल कसरी जुटाउँछन् ? यसमा वहस हुनुपर्छ ।
‘नाना थरी स्टाटसको जबाफ दिनु जरुरी छैन ’
सैनामैनाका दुई हजार आठ परिवारलाई राहत बितरण एवं निरन्तर बजारमा अनुगमन
नेपाली काङ्ग्रेस नवलपरासिवाट स्थानिय तहलाई राहत
कपिलवस्तुका एक युवाको स्वाब परिक्षणका लागि नमुना बुटवल पठाईयो
वाणगंगामा ६ महिनासम्म औषधि र खाद्यान्नको अभाव नहुने